နားဦးတည့်ရာ သုံးဆယ့်တစ် – Alice Bertha Gomme (Bingo) (For Gi and We) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Music » နားဦးတည့်ရာ သုံးဆယ့်တစ် – Alice Bertha Gomme (Bingo) (For Gi and We)	6
Posted by မြစပဲရိုး on Jul 4, 2015 in Music |6comments
ဓာတ်နူးဂိုင်းဂျုပ် မောင်မောင်ဝီ အဲလေ မောင်မောင်ဂီ ကိုအားကျလို့ တီး ရင်း ဆိုနိုင် တဲ့ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ် လေး အကြောင်း တင်ဆက်ပျဇေ။
သိုးဆောင်း ကလေး ကဗျာ လေး ပါ။
ဒီ သီချင်း ကိုတော့ ရွာသူ/သား တွေ နားရည်မဝသူများ မယ်။
(နားရည်မဝဆို ကလေးသီချင်း ဘူမှ ကော်ပီ လုပ်ဘူး။ သည်အကြောင်း အောက်မှာ မပြောတော့ပါဘူး။)
သည်သီချင်းက ဗြိတိသျှ folklorist, Alice Bertha Gomme က ရေးစပ် သီဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၁၈၈၈ လွန်နှစ်တွေမှာ အလွန် ကျော်ကြားပြီး နောက်ပိုင်း ဗားရှင်း ၈ခု ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
. နောက်ဆုံး မော်ဒန် ဗားရှင်း ကတော့ မူကြိုကလေး များ အတွက် သီဆိုဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သည်သီချင်းရေးဖြစ်ပုံအကြောင်း တော့ ရှာမတွေ့လို့ “သူပြောပြတာကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ” ပြောမရတာမို့ ကွကို ဘဲ ထင်ရာ ရှင်းရှင်း ပြောပါမယ်။။
“တညမှာ ရုတ်တရက် သူနိုးလာတယ်.. အနားက လယ်သမား ကြီး ရဲ့ ခွေးဟောင်သံ ကြောင့်ပေါ့။ “လက်ခုတ်” လိုက်ပြီး မိနစ်ဝက်အတွင်း အပြီးရေးခဲ့ပါသတဲ့…။”
ပထမ ပိုဒ် ကို အားပါးတရ ကြိုက်သလို အော်ကြပါ။
ဒုတိယ အခါ ပြန်ကျော့ချိန် နေရာအရောက် “ဘီ” ကို မဆိုဘဲ “လက်ခုတ်” တစ်ချက် တီးကြပါ။ နောက် က I-N-G-O ကိုဘဲ ဆိုပါ။
တတိယ အခါ ပြန်ကျော့ချိန် “ဘီ” နဲ့ “အိုင်” ကို မဆိုဘဲ “လက်ခုတ်” နှစ်ချက် တီးကြပါ။ နောက် က N-G-O ကိုဘဲ ဆိုပါ။
စတုတ္ထ အခါ ပြန်ကျော့ချိန် “ဘီ” ရယ် “အိုင်” ရယ် “အန်န်” ရယ်ကို မဆိုဘဲ “လက်ခုတ်” သုံးချက် တီးကြပါ။ နောက် က G-O ကိုဘဲ ဆိုပါ။
ပဉ္စမ အခါ ပြန်ကျော့ချိန် “ဘီ” ရယ် “အိုင်” ရယ် “အန်န်” ရယ် “ဂျီ”ရယ် ကို မဆိုဘဲ “လက်ခုတ်” လေးချက် တီးကြပါ။ နောက် က O ကိုဘဲ ဆိုပါ။
ဆဌမ အခါ ကတော့ စာလုံး အားလုံး ကို မဆိုဘဲ “လက်ခုတ်” ငါးချက် တီးကြပါ။
သည်သီချင်းကို Music Video ရိုက်တော့ ခွေး၊ ဝက်၊ ကြက် ၊ သိုး၊ မြင်း မန်ဘာ အချင်းချင်း ဝင်တိုက်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြသေးတာ ရိုက်ကူးရေး နားရသေးတာ အမှတ်တရပါ။
သည်အချက်တွေကြောင့်ပဲ နောင် တချိန်မှာ ကလေးများဟာ လက်ခုတ်တီးခြင်း ဖြင့် ဦးရာ ကို လက်မြန်မြန် ဗျင်းနိုင်ခြင်း စွမ်းရည် ရရှိခဲ့ပါတော့တယ်။
. နောက် အပုဒ် ဗားရှင်း တွေ တော့ စိတ်ဝင်စားရင် ကွကိုယ်သာရှာကြပါတော့။
ကျွန်မတို့ နှစ်သက် တဲ့ လက်ခုတ်တီးခြင်း ဟာ fork ပဲဖြစ်ဖြစ် Spoon ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ..။
ဘာတွေ ဘဲ ကိုင် ထားထား။
အသာချ ပြီး လက်နှစ်ဖက် ကို သုံး တီးနိုင်ပါတယ်။
. နားဆင်ခံစားသူအတွက်ရော လေ့လာဆည်းပူးမှုအတွက်ပါ ကလေးများ လက်သန်မာရေး အတွက် အတော်လေး ကျေးဇူးကြီးဖူးတဲ့ သီချင်းဖြစ်ပါကြောင်း…။
ဟိ ဟိ ဟိ။ :-))))
Ref : https://en.wikipedia.org/wiki/Bingo_%28folk_song%29
အပေါ်က စာတွေ က မောင်ဝီ (မှားလို့) မောင်ဂီ ကို နောက်တာပါ့။
တကယ်တော့ ရွာ့ မြေးလေး ဝီလီလေး အတွက် ဘေဘီသီချင်း ကဗျာ လေး တွေ မျှပေးချင်လို့ပါ။
သုံးလ ဆို သီချင်းလေး တွေ ကောင်းကောင်း နားထောင်တတ်ပြီ၊ အသံ တွေ ကို သင်ယူနေပြီ။
အရုပ်လေးတွေ ကို တော့ ကြည့်တတ်ဖို့ နဲနဲ စောဦးမယ်။
ကိုယ့်တုန်းကလဲ ဒီကလေး ကဗျာတွေ၊ ဇာတ်လမ်း တွေ နားထောင်ရင်း ကြည့်ရင်း ၄နှစ် ၅နှစ်လောက် အပျင်းဖြေ ခဲ့ရပါတယ်။
အခုချိန် အဲဒီ ကလေး အသေးလေး နဲ့ အတူတူ သီချင်းတွေ နားထောင်ချင်လို့ မရတော့ဘူး။
ဒီတော့ ရသမျှ အချိန်လေး တွေ မှာ သူတို့ နဲ့ အချိန်ပေး ကစားကြ ၊ နေပေးကြပါလို့စ်။ :-)))
မြစပဲရိုး says: BINGO
And Bingo was his name-o. B-I-N-G-O! B-I-N-G-O! B-I-N-G-O!
မြစပဲရိုး says: Wheels On The Bus | Plus Lots More Nursery Rhymes |
ဇီဇီခင်ဇော် says: Humpty Dumpty
ဇီဇီခင်ဇော် says: 10 Green Bottles
@QUIL@ says: အယ်… ပြောင်ဒယ်လား … ကျန်းးးးး
ထားပါတော့လေ သီချင်း အကြောင်းပဲ ပြောပါတော့မယ်..
အဲ့ဒါက ကလေးသီချင်း ဆိုတာထက် … လူကြီးတွေအတွက် ပညာယူတတ်ရင် ယူစရာတွေပါတဲ့ သီချင်းဗျ…
ပထမဆုံး Timing ကို လေ့လာနိုင်တယ်
ပုံမှန် Timing ရှိတဲ့ တေးသွားတခုရဲ့ Bar တခုမှာ4Beats ပါတယ်ဗျ…။
BINGO က စာလုံး ၅လုံးမလား …။ သူခွဲခြားသွားတာက…
|1-2-3n-4| ဆိုပြီး 3rd Beat မှာ On-Off ၂ချက်ခွဲပြီး timing ရေတွက်ထားပါတယ်။
အရပ်ထဲ အလွယ်ပြောတဲ့ ဒူ-ချပ်-ဒူဒူ-ချပ် ဆိုတဲ့ အလိုက် အတိုင်းပေါ့…။
(လက်ခုပ်တီးတဲ့ timing ကိုကြည့်ရင်လည်း သိသာပါတယ်ဗျာ… ကျန်တဲ့ လက်ခုပ်တွေထက် NG က စိပ်နေတာကိုပေါ့)
စကားကြီးစကားကျယ်ပြောပြီး ၀ါးလက်ခုပ် ဌာန်ကရိုဏ်းကျအောင် မတီးတတ်တဲ့….
လေသိုင်းဆြာတွေ သည်ကစပြီး လေ့ကျင့်သင့်ပါသဗျ…. အဟိ
CHORUS မှာ BINGO ဆိုပြီး ၃ခါ ဆိုတဲ့ melodic တွေကိုလည်း လေ့လာလို့ရသေးသဗျ…
ရှေ့၂ခေါက် နဲ့ နောက်တခေါက် ဘာကွာသလဲ ဘယ်လိုကွာသလဲ သိရင်ကို မဆိုးတော့ဘူး…
ကလေးသီချင်းတွေ အထင်မသေးရဲဘူးဗျ…. ဒါမျိုးတွေနဲ့ စလေ့လာတာ ကောင်းတယ်..
Alinsett @ Maung Thura says: လက်ခုပ်တီးခြင်းဟာ အနုပညာာာ